Archive du 20180215
Marc Ravalomanana “Tena sahirana ny vahoaka, mila mihavana isika”
Vonona hiroso amin’ny fampihavanam-pirenena tena izy ary hifanatrehana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny nambaran’i Tabera Randriamanantsoa araka ny resaka nifanaovana taminy.
Fampihavanam-pirenena Samy maka ho azy ny CFM, CRN, HMF
Ratsy ny politika eto amintsika ! Tsy am-pihambahambana no ilazana fa tsy mahatoky ny rafitra misahana ny fampihavanam-pirenena izay efa najoro ireo milaza fa samy mpampihavana.
Fivavahana sy politika Afaka miaraka tsara
Miteraka adihevitra amin’ny samy Malagasy ny fifangaroan’ny resa-pinoana sy ny politika eto Madagasikara. Iaraha-mahalala sy mahita fa mivavaka ny Malagasy, maro ny antokom-pinoana miforona eto amintsika. Mifanindran-dalana amin’izay ihany koa anefa ny fahamaroan’ny antoko politika eto an-tanàna.
Mpomba an-dRajoelina Lasa mersenera ny ankamaroany
Miverina eo amin`ny tontolo politika amin`izay ny filohan`ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina, ary efa ampy azy izay ny fotoana nanginana sy tsy nitenenana nandritra ny efa-taona.
Tetibolan’ny kaominina Tara ny fahatongavany, hoy ny Prefe
Tsy araka ny fotoana voafaritry ny lalàna ny nahatongavan’ny tetibolan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra teny amin’ny prefetktioran’Antananarivo, hoy ny jeneraly Ravelonarivo Angelo.
Raharaha Sygmma Miantso ny filoham-pirenena ny elatra Lucien Razafindraibe
Taorian’ny didim-pitsarana nivoaka tamin’ny herinandro, izay manameloka ny sekretera jeneralin’ny sendikan’ny tantsambo, Lucien Harinony Razafindraibe, hisazy mihatra 18 volana an-tranomaizina sy manery azy hamerim-bola mitentina 576 tapitrisa ariary an’ity fikambanana ity dia mbola nanao fanambarana tetsy amin’ny Mon gouter Andrefanambohijanahary indray omaly ny mpomba ity lazain’izy ireo ho hany tokana sekretera jeneralin’izy ireo ity.
Mpiasan’ny Classic kinitwear - Andraharo Nomena 72 ora ny minisiteran’ny asa
Nitokona nanoloana ny biraom-pirenena manara-maso ny asa etsy Antsahavola omaly ireo mpiasa miisa 200 mahery eo anivon’ny orinasa afaka haba Classic kinitwear eny Andraharo.
Federasionin’ny mpaka sary Efa mivonona amin`ny fivoaran`ny Teknolojia
Andro iray toa zato ho an`ny mpikirakira sary eto Madagasikara ny talata 13 febroary lasa teo.
Ilaivola Ivato Kotaba tsy misy fiafarany
Velon-taraina ny mponina ao Ilaivola Ivato. Tao anatin'ny roa herinandro izay dia kotaba tsy misy fiafarany no iainan'ny mponina ao amin'ny fokontany Ilaivola Ivato.
Savorovoron’ny fanatanjahantena Malagasy Miantso ny minisitra handray andraikitra ny C2RFM
Iray volona izay no nahatongavan’ny taratasin’ny FIFA tao amin’ny filoha vonimaikan’ny FMFmikasika ny hampiaatoana ny fifidianana an’ireo tompon’andraikitra hitantana ny baolina kitra Malagasy (seksion, ligy ary federasiona) raha mifaraka amin’ny lalàna Malagasy noho ny fitarainana marobe voaarain’izy ireo any Zurich.
Seksion’ny rugby Vakiniadiana Manohitra ny fisandohana andraikitra
Nampiseho ny tenany am-pahibemaso tamin’ny fitafana tamin’ny mpanao gazety teto Antananarivo tamn’ny talata 13 febroary 2018 teo ny mpitantana ny rafitra seksion’ny rugby Vakiniadiana notarihan’ny filohany, Rakotoniaina Patrick notronin’ny SG-ny sy ny Mpitambolany.
Champions League ampahefa-dalana Real Madrid 3 - PSG 1 – Liverpool 5 - Fc Porto 0
Azo ambara fa tena niady fo mafy ny ekipan’ny Real de Madrid Espagne vao nandresy 3-1 an-taniny ny ekipan’ny PSG Frantsa halina tao amin’ny kianjan’i Santiago Barnabeu teo amin’ny lalao mandroson’ny fifaninanana « Champion’s League 2018 ».
Mitsimoka ny fihavanana sa…?
Mitady hisy tsirim-panantenana ny resaka fifanatonana eo amin’ny samy mpanao politika tsy mitovy hevitra eto amin’ny firenena amin’izao fotoana.
Mpitatitra RN1-RN 4 ary RN 6 Tsy mbola nisy nanaiky nifindra teny Andohatapenaka omaly
Omaly alarobia 14 febroary no fotoana notondroin’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT) tsy maintsy hifindran’ireo mpitatitra mihazo ny lalam-pirenena voalohany sy fahefatra ary fahenina eny amin’ny tobim-piantsonana vaovao Andohatapenaka.
Gripa sy ny fanaovana dokotera tenany Mety mahafaty raha manano sarotra ny fitrangany
Mety mahafaty ilay gripa mahery, indrindra raha manano sarotra ny fitrangany nefa tsy entina manatona dokotera na tobim-pitsaboana fa anaovana dokotera tenany.
CSB II Andoharanofotsy Voan’ny gripa mahery ny 80 %-n’ireo marary
Mirongatra hatrany ny gripa mahery eto an-drenivohitra. Raha araka ny fanadihadiana natao tao amin’ny CSB II Andoharanofotsy dia saika lasibatr’ity aretina ity avokoa ny 80 %-n’ireo marary tonga manatona. Tsy hanavahana sokajin-taona intsony fa lasibatra avokoa eny hatramin’ireo zaza menavava.
Lefakozatra eto Madagasikara Tsy mbola fongotra
Notanterahina omaly alarobia 14 febroary tetsy amin’ny hotely Colbert ny fanombohana ny fiofanana ho an’ireo komity miady amin’ny lefakozatra.
Erick Rajaonary “Tena sahirana ny mpandraharaha Malagasy”
Notanterahina omaly tetsy amin’ny Tranoben’ny Varotra sy ny Indostria ny fivoriambe tsy ara-potoanan’ny FIV.MPA.MA izay notarihin’ny filohany Erick Rajaonary.
Fakana an-keriny tany Toamasina Sarotra ny raharaha, hoy ny Emmo reg
12 andro taorian’ilay fakana an-keriny nataon’ireo andian-jiolahy miisa 05 an’i Akil Cassam Chenai tao an-tranony ao Salazamay, dia nivoaka tamin’ny fahanginany ny Emmo-Reg atsinanana nanomezan’izy ireo ny fandehan’ny fikarohana sy ny fanadiadiana ary ny fisamborana ireo mpaka an-keriny, izay hita avy hatrany fa tena mampiaiky azy ireo fa sarotra sy mikatso tanteraka ny raharaha.
Afrika Atsimo Nametra-pialana ny filoha Jacob Zuma
Nametra-pialana omaly ny filoha Afrikanina tatsimo Jacob Zuma. Nanapa-kevitra ny hiala amin’ny maha filohan’ny repoblika ahy, aho na dia tsy mitovy hevitra amin’ny antoko niaviako aza, hoy i Jacob Zuma tamin’ny fanambarana fohy nataony halina.
Afrika atsimo Tsy manaiky lembenana ny filoha Zuma
Nandritra ny valandresaka nataon’ny mpitambola jeneralin’ny antoko ANC (African national Congres) Paul Mashatile tany Cap dia hisy ny adihevitra ho fitsipaham-pitokisana ny filohan’i Afrika Atsimo Jacob Zuma ao amin’ny Antenimiera anio raha tsy mbola mametra-pialana izy mba ahafahana mampitsahatra azy amin’ny asany sy mifidy ary mametraka ny filoha mpitantana vaovao ny antoko ANC Cyril Ramaphosa.
Voahangy Rajaonarimampianina Manao asa soa tokoa ve ?
Efa lasitra maneran-tany ny tsy fitsabahan’ny vadin’ny filoha loatra amin’ny fitantanana ny firenena. Any anaty asa sosialy no tokony hahitana azy bebe kokoa.